Kulanka Golaha Shacabka ee maanta waxaa hareyn doona doodda War-bixintii Guddiga Maaliyadda – Kalfadhi
Kulanka Golaha Shacabka ee maanta waxaa ajandaha ku ku jira “War-bixin Miisaaniyadeedka 2018-ka”. Golaha waxaa soo buux dhaafiyey wasiiro aad u fara badan, oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka. Wasiirka Maaliyadda ayaa la filayaa inuu yimaado, oo uu ka hor hadlo Golaha, kaas oo ay wararku sheegayaan inuu mar hore gaaray halkaas.
Kulanka Golaha Shacabka, oo aad xiisa badan maanta, ayaa wariyaha Kalfadhi oo jooga Xarunta Golaha waxa uu sheegayaa in, marka ka eego hadal-haynta Golaha, ay xildhibaanadu 2 u kala jaban yihiin: qaar aaminsan iney war-bixintii Guddiga Maaliyadda iyo Miisaaniyadda ahayd been abuur iyo arrin la siyaasadeeyey iyo kuwa qaba iney war-bixintu run sheegeyso.
Marka la eego labada jaanib ee ay xildhibaanadu kala taagan yihiin, waxaa muuqaneysa in Kulanka Golaha Shacabka uu maanta wajahayo dood adag, oo eedeyn iyo difaacid isugu jiri karta. Wasiirada jooga kulanka waxaa ka mid ah Wasiiirada Amniga, Ganacsiga, Qorsheynta, Ciyaaraha, Diinta, Beeraha Kaluumeysiga, Dekadaha iyo kuwa kale.
Wasiirka Maaliyadda, oo horay uga hadlay eedda Guddiga Maaliyadda, waxa uu sheegay in aysan Bangiga Aduunka iyo IMF-tu taageerteen Soomaaliya haddii uu musuq-maasuq jiro. Hanti-Dhawraha Qarankuna waxa uu sheegay in war-bixinta Guddiga ay ka soo hormartay waqtiga Xisaab Xirka ee Miisaaniyadda, oo uu sheegay in ay sanad kasta dhacdo bisha Abriil, iyaguna ay u soo gudbiyaan Golaha Shacabka bisha Meey ee sanad kasta.